Lixabiso CNC ekujikeni Stainless mveliso kunye nabathengisi | Ouzhan
Izinto eziphambili zensimbi engenasici ziyi-carbon, i-chromium, i-nickel, kunye nezinye izinto ezifana ne-molybdenum, ithusi kunye ne-nitrogen. Eyona nto iphambili ekubambeni intsimbi engenasici yiCr (chromium), kwaye kuphela xa umxholo weCr ufikelela kwixabiso elithile, intsimbi inokumelana nokubola. Ke ngoko, intsimbi engenasici iqulethe ubuncinci i-10.5% yeCr (chromium).
Insimbi engenasici inezinto ezinje ngo-Ni, Ti, Mn, N, Nb, Mo, Si, no Cu. Iindawo zokuguqula i-cnc zentsimbi zinkulu kakhulu kwaye zisetyenziswa kakhulu ekutyeni, kwimichiza, kubhabha ngenqwelomoya nakwakhiwa. Ukulungiswa kweLathe yinxalenye yokuqhubekeka ngomatshini. Ukulungiswa kwe-Lathe ikakhulu kusetyenziswa isixhobo sokujika ukujika indawo yokusebenza. Uqheliso, i-reamers, i-reamers, iitephu, ukusweleka kunye nezixhobo zokujija zinokusetyenziswa kwi-lathe yokuqhubekeka ngokuhambelanayo. I-lathes isetyenziselwa ubukhulu becala i-shafts shafts, iidiski, imikhono kunye nezinye izinto zokusebenza ezinendawo ezijikelezayo. Zezona ziluhlobo lusetyenziswa kakhulu kumatshini wokulungisa izixhobo kwimizi-mveliso yoomatshini kunye nokulungisa iifektri.
Izinto eziluncedo ze Ouzhan insimbi wajika iinxalenye
-Ukhuselo oluhlaza kunye nokusingqongileyo, i-stainless steel inokuba yi-100% iphinde isetyenziswe, ayizukubangela ungcoliseko lokusingqongileyo, kwaye ilulungele uphuhliso oluzinzileyo; inkunkuma engenasici engenanto inexabiso elikhulu kwezoqoqosho.
-Iipropathi zeKhemikhali: Ukuchasana nemichiza kunye nokumelana ne-electrochemical corrosion zezona zinto zibalaseleyo phakathi kwezinto zentsimbi, okwesibini zii-alloys ze-titanium.
-Izinto ezibonakalayo: ukumelana nobushushu, ukumelana nobushushu obuphezulu, ukumelana nobushushu obuphantsi kunye nokumelana nobushushu obusezantsi kakhulu.
-Iipropathi zoomatshini: Ngokweentlobo ezahlukeneyo zentsimbi engenasici, iipropathi zoomatshini zahlukile. Isinyithi seMartensitic sinamandla amakhulu kunye nobulukhuni, kwaye kufanelekile ukuvelisa izinto ezinokumelana nomhlwa ezifuna amandla aphezulu kunye nokumelana nokunxiba okuphezulu, okufana ne-hydraulic shafts shafts kunye ne-stainless steel. Iimela, iibheringi zentsimbi engenanto, njl., I-austenitic insimbi engenasici ineplastikhi elungileyo, hayi amandla aphezulu kodwa eyona nto inokumelana kakuhle nomhlwa phakathi kweentsimbi ezingenazintsimbi. Kufanelekile kwizihlandlo ezifuna ukumelana nokubola kodwa iipropathi zoomatshini eziphantsi, ezinje ngezityalo zamachiza kunye nezityalo zesichumiso. Izixhobo zezixhobo ze-acid ye-sulfuric acid kunye ne-hydrochloric acid, njl., Kakade, zinokusetyenziswa nakwimikhosi yasemkhosini enjengeenkwili. Insimbi engenasici ye-Ferritic ineempawu ezilinganiselweyo zomatshini kunye namandla asezantsi, kodwa iyamelana ne-oxidation kwaye ilungele iindawo ezahlukeneyo zomlilo.
-Ukusebenza kwenkqubo: I-Austenitic insimbi engenasici inenkqubo efanelekileyo yokusebenza. Ngenxa yeplastikhi yayo elungileyo, inokusetyenzwa kwiipleyiti ezahlukeneyo, iityhubhu kunye nezinye iiprofayili, ezifanelekileyo ukulungiselela uxinzelelo. Isinyithi seMartensitic sinenkqubo yokusebenza kakubi ngenxa yobunzima obuphezulu.
Inkonzo yokujika intsimbi engenasiphelo ye-china yomatshini wentsimbi ojikeleze ngentsimbi
I-Ouzhan ngumzi mveliso wokudibanisa urhwebo kunye norhwebo, ukubonelela ngenkonzo enye yokujika kunye neenkonzo zokugaya umatshini. Ngokweemfuno zabaxumi, ukuchaneka okuphezulu kwe-CNC ukuguqula iinxalenye zentsimbi engenasici ngomgangatho ozinzileyo nothembekileyo kunokuqhubekiswa. La malungu omatshini enziwa kusetyenziswa eyona mveliso ikumgangatho ophezulu, efunyanwa kubathengisi abaziwayo beemarike. Iqela lethu lobuchwephesha elinamandla kunye nobuchule kunye nolawulo olusebenzayo kunye nenkqubo yokusebenza inokuqinisekisa ukwenziwa ngokugqibeleleyo kweentsimbi zomatshini ezijikaji zensimbi. Ukongeza, iimveliso zentsimbi ezenziwe ngentsimbi ye-CNC zibonelela ngokungqinelana nemigangatho esemgangathweni kwaye zinokusetyenziswa kwizicelo ezahlukeneyo zeshishini. Kwaye sinokubonelela ngeenkonzo zokukhuphisana ngexabiso lensimbi ye-CNC yokujika iimveliso kubathengi bethu abaxabisekileyo.
Iindawo isicelo steel stainless ukujika iindawo:
Icandelo lemoto, iimoto, iibhasi, oololiwe, iimoto ezisendleleni kunye nezinye iindawo.
Iimarike ezintlanu ezinokubakho zentsimbi engenasici, kubandakanya ishishini lamanzi, ishishini lokwakha, ishishini lezixhobo zasekhaya, icandelo lokhuseleko lokusingqongileyo kunye nezixhobo zeshishini.
Izinto eziluncedo ngeenkonzo zokujika zentsimbi
-Ukuchaneka konke kwe-CNC kuguqulwe iimveliso zentsimbi engenasici ziphantsi kovavanyo olungqongqo lomgangatho.
-Inkonzo ye-OEM ekhawulezayo inokuqinisekisa ukuba ufumana iimveliso ezinqwenelekayo, inkxaso ye-DDP, i-CIF, i-FOB kunye nezinye iindlela zokuhlawula ukuqinisekisa ukuba abathengi banokuzifumana iimpahla ngokukhuselekileyo.
-Ngokuya kwimizobo okanye iisampulu zokwenza izinto zentsimbi ezijika ngokuchanekileyo.
Egqithileyo Ukuphosa i-aluminium alloy kufa
Okulandelayo: Custom Hot extrusion zakha Iinxalenye
Elungiselelweyo ubhedu electroplated ukujika iindawo pr ...